Apps amin'ny volana: Febroary 2016 - News Fitsipika
Apps amin'ny volana: Febroary 2016
Ny Mpandinika ny fampiharana mpanome hevitra fahazoan-dalana hiditra 10 Apps ary 10 Lalao finday dia ny hita tamin'ity volana ity, avy Lonely Planet mitarika dia afaka mitahiry ivelan'ny aterineto ny lalao izay mamela anao mihazakazaka ny gazety
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Apps amin'ny volana: Febroary 2016” dia nosoratan'i Stuart Dredge, fa ny Mpandinika tamin'ny Alatsinainy 15 Febroary 2016 08.00 UTC
Ny farany fampiharana an'ny mpanao dia lavitra avy any Lonely Planet, izany no tsara - ary afaka! - Asa ny hamindra ny sasany ao an-tanàna avy amin'ny boky mpitari-dalana ho amin'ny kely efijery. Am-polony ny tanàna dia hita ao amin'ny fandefasana, miaraka amin'ny sarintany fa afaka mitahiry ivelan'ny aterineto - ny mahasoa mikasika.
Maro ireo mpampiasa Mac no fantatra momba ny fiaramanidina ny slick mailaka biraonao rindrambaiko nandritra ny fotoana kelikely. Ary ny nahazo dika tena tsara ho an'ny iPhone. Tsy miasa amin'ny tolotra mailaka malaza maro, Mbola betsaka mantsy ny endri-javatra mba hanafainganana ny Inbox fitantanana, ary na dia manana milamina Apple Watch fampiharana.
Mahafinaritra ity ny fampiharana ny ankizy efa nivoaka nandritra ny fotoana kelikely tao amin'ny iOS, fa ny vaovao Android. Tena iray ifandrimbonana abidy natao ho an'ny touchscreens, amin'ny fihetsik'ireo sary mihetsika mampiseho ny teny ho an'ny ankizy rehefa tap sy swipe ny lalana amin'ny alalan'ny taratasy.
Iray hafa vao nikoropaka fanaovana fampiharana ny lalana eo amin'ny Android, izany fanompoana an'ny fanangonam-bola Kickstarter. Tena tsara izany fomba mba mijery vaovao miezaka ny hanangana tetikasa-bola, sy toy ny mahita ny zavatra namana no manampy.
Misy be ny fampiharana sy ny fitaovana - ary matetika fitaovana amin'ny fampiharana - noho ny Tracking ny dingana sy manampy anao hahazo bebe kokoa mavitrika. Movesum dia manan-tsaina ny heviny, mampiseho ny fomba kaloria maro ny mandeha ilay nodoran'i, ary mampirisika anao mba mandinika ny tanjona isan'andro.
Ny vaovao avy any Apple rindrambaiko mozika, fa noho ny tsoratra hira fa tsy mihaino azy ireo. Mikendry mpamoron-kira ny ambaratonga rehetra, izany manampy anao firaketana an-tsoratra hira na fohy hevitra, hametraka virtoaly drummer sy bassist; Tag ny rakitsary mba hahita azy ireo tatỳ aoriana,; dia hanondrana na mizara izany.
, indray mandeha: ONE Match isan'andro
Tinder dia tsy ny fampiharana ihany no tao an-tanàna ny mampiaraka. Raha vao ny schtick dia fa fahazoan-dalana hiditra anareo zavatra iray lalao isan'andro: dia afaka mahita ny iray ihany no hafa, miaraka amin'ny teny fikasana ny olombelona fa tsy matchmakers algorithms fotsiny ny fanampiana avy.
"Indray andro" dia mazava tsara ny lohahevitra amin'ity volana ity. Izany fampiharana avy Warner Music Group, nanolotra ny mozika vaovao ny filaharan-kira isan- 24 ora. Ianao no mila ny ho fandoavana Spotify famandrihana mba hampiasa azy io, ary manantena be dia be ny mpanakanto Warner ho endri-javatra.
Millie MAROTTA NY COLOURING Adventures
Mihodina ankehitriny, raha ny fironana ho an'ny olon-dehibe boky fandokoana mahazo ny osilahy: Mitaky izany ny hevitra ho iPad. Ny sary izay ianao mandoko tsara tarehy, anefa: natiora sary avy amin'ny asa ny sary nataon'i Millie ny boky malaza. Apps hafa manao izany, fa izany mahatsapa ny tena toy ny tena fandokoana.
Tsy ny asa rehetra ao amin'ny Microsoft: ny teknolojia ny andrana goavam-be Apps ekipa dia manana fomba vaovao ho anareo ny mifoha. Mba vonoy ny fampiharana ny fanairana famantaranandro, tsy maintsy "maka tahaka" zavatra: avy nisintona anankiray tava ny hoe nisy andian-teny. adaladala? A kely, fa izany no hampifoha anao.
– lalao APPS –
Ny famaritana ho toy ny "crafting RPG" Mety hampahatsiaro anareo ny Minecraft, fa Crashlands dia biby hafa. Rehefa avy fianjerana-fipetrahana amin'ny vahiny planeta, tsy maintsy nandehandeha nitady hanina ny fitaovana, ady biby ka hanao ny faladiany raha mamoaka ny tantara mahaliana. A tena Fifaliana.
lafiny roa INC
Raha tianao puzzlers fa mandreraka ny lalao-telo "Saga" raikipohy, Lafiny roa Inc no fanefitry. Tsy mahita anao hay fantarina andalana ny miloko efamira amin'ny fanandranao mba hameno trano fisotroana tao an-tampon'ny efijery, manohitra hatrany sarotra "hetsika" fetra. Original, ary tena doha.
NY Westport Mahaleotena
Papers, Masìna ianao, mbola iray amin'ireo tena nieritreritra-mampisaintsaina finday lalao, ary izany nendahina avy amin'ny iray ihany lamba. Ianao hanova ny gazety tao amin'ny "taorian'ny ady" firenena sliding ho fitondrana jadona, ary tsy maintsy Ampifamadiho ny lohateny sy hanivana tantara araka izay hitanao fa mety. na, Raha be herim-po ianao, avelao ihany ...
Raha Lehibe tao amin'ny vanim-potoana ao an-trano ny Spectrum solosaina, Downwell ny Retro sary hitondra fanaintainan'ny Nostalgia. Fa na dia tsy, ny tsotra nefa feno hafetsena mianjera-midina-a-tsara ho ela gameplay nitora-famosaviana anao. Hery-dehibe anjara lehibe rehefa milalao, maty ary avereno.
Mipoaka kittens dia quirky lalao karatra izay vatsian'ny ny feon-kiran'ny $ 8.8m amin'ny Kickstarter. Izany fahombiazana no nanampy ny mpamorona hampiakatra azy ho finday lalao, izay toy Mahafinaritra. Aoka ianao ho fampitandremana: mila mpilalao roa nametraka izany teo amin'ny iPhones mba na dia milalao.
Fans ny Final Fantasy hampionona RPGs Efa betsaka ny vintana milalao lalao be taona ao amin'ny andian-dahatsoratra momba ny finday fitaovana. Adventures ny Mana no farany remake - ny lalao izay kokoa mpilalao Lalaom-pirahalahiana mety tsy mahalala - ary manolotra mareva-doko silaka RPG tantara.
Countdown: NY OFISIALY APP
Be ny olona milalao Countdown eny an-Sofas - amin'ny alalan'ny milalao miaraka amin'ny lohany sy ny TV lalao seho. Ary misy iray hafa: ofisialy ity lalao finday, miaraka amin'ny taratasy sy ny isa fihodinana ary koa ny conundrums mba hamahana. Tsy miasa tsara, anisan'izany ny roa-mpilalao-on-iray-fitaovana fomba.
Ianao mahazo ny ankamaroan'ny avy ity lalao ity raha toa ianao efa misaraka tsara ny Rick Adult sy Morty sariitatra, saingy mahafinaritra ho an'ny vao tonga koa. Unashamedly aingam-panahy Pokemon, Izany dia midika hoe feno hatsikana rehefa hisambotra sy nampiofana samihafa dikan 'ny Morty toetra.
Te vaovao ny heviny eo amin'ny sehatra lalao? Izany dia manome izany: ny tapa-kazo kely-toetra amam-panahy mihazakazaka sy mitsambikina manodidina ny andian-faribolana, miasa ny lalana ho any amin'ny foibe raha ny fandosirany fahavalo. Toa mafy amin'ny voalohany, fa rehefa zatra ny gadona, dia ho lasa zava-tsarotra ny maharesy lahatra.
An inventive maka vaovao ny tanàna-trano tetikady izay lasa mahazatra ny Genre amin'ny finday. ity lalao, avy amin'ny lalao malaza marika Atari, Mankalaza ny LGBTQ (vehivavy miray amin'ny vehivavy, pelaka, bisexual, transgender sy ny Queer) fiaraha-monina, tanteraka tamin'i Pride fety toy ny centrepoints.
26935	7 Android, Apps, Apps amin'ny volana, Article, Toetoetra, Games, IOS, Observer Tech Monthly, Smartphone, Stuart Dredge, Teknolojia, ny Mpandinika
← Maro loatra Mason'ny manimba ny Memory 4 Real Flying Cars Izany marina Fly [VIDEO] →